Aiming high! မက်ဆီကို သူ့အသင်းအတွက် ခေါ်ယူဖို့ ဘက်ခမ်း ဆက်သွယ်ချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ် |
သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ အင်္ဂလန်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းဟာ မေဂျာလိဂ်မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တော့မယ့် သူ့ရဲ့အသင်းသစ် အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းအတွက် ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီကို ခေါ်ယူဖို့ ဆက်သွယ်ချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘက်ခမ်းရဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့ အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းဟာ ၂၀၂၀ မတ်လမှာစတင်မယ့် မေဂျာလိဂ်ရာသီသစ်မှာ စတင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီး ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့ ယူနိုက်တက်ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ဘက်ခမ်းအနေနဲ့ ပထမဆုံးရာသီမှာကတည်းက အင်အားကြီးအသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း Barcelona Radio host Xavi Campos ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ မက်ဆီအနေနဲ့ သူသာ ဆန္ဒရှိရင် ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီအကုန်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ထွက်ခွာခွင့်ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ဘက်ခမ်းက မက်ဆီကို အမေရိကန်နိုင်ငံဆီ ပြောင်းရွှေ့လာဖို့ ဆက်သွယ်ချဉ်းကပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဘက်ခမ်းကိုယ်တိုင်ကလည်း အရင်တုန်းက သူ့ရဲ့အိပ်မက်ဆန်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပစ်မှတ်တွေအကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ဖူးပြီး ယခုနှစ်အစောပိုင်းက လက်ရှိကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မက်ဆီနဲ့ ရော်နယ်ဒို နှစ်ယောက်စလုံးကို သူ့အသင်းသစ်အတွက် ခေါ်ယူလိုတယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။
မက်ဆီဟာ ရာသီသစ်မစတင်ခင် ရရှိခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် ဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် တစ်ပွဲမှ ပါဝင်မကစားရသေးပေမယ့် သူနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းတွေက ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အတော်လေးထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
”မက်ဆီဟာ ၂၀၂၁ အထိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီး စာချုပ်မပြည့်ခင် ၁နှစ်အလိုမှာ သူဆန္ဒရှိရင် အသင်းကနေ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ထွက်ခွာခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ သူဟာ သူ့အနာဂတ်အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက အသင်းအပေါ် အရမ်းချစ်မြတ်နိုးပြီး ကျွန်တော်လည်း ဒီအချက်ကို မစိုးရိမ်ပါဘူး”
”ဇာဗီ၊ အင်နီယေစတာနဲ့ ပူယိုးလ်တို့လည်း မက်ဆီလိုပဲ စာချုပ်ထဲမှာ အဲဒီအချက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီကို ကွဲပြားခြားနားတဲ့အချက်နဲ့ စာချုပ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းမချုပ်ဆိုထားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ထပ်ပြောပါမယ်။ မက်ဆီအနေနဲ့ အသင်းမှာ နောက်နှစ်အကြာကြီး ဆက်ကစားဦးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် လုံးဝသံသယမ၀င်ပါဘူး”လို့ ဘာစီလိုနာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဘာတိုမူက မကြာသေးခင်က ပြောကြားထားပါတယ်။
Aiming high! မကျဆီကို သူ့အသငျးအတှကျ ချေါယူဖို့ ဘကျခမျး ဆကျသှယျခဉျြးကပျခဲ့တယျလို့ သတငျးထှကျပျေါ
သတငျးတှရေဲ့ဖျောပွခကျြအရ အင်ျဂလနျအသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျး ဒေးဗဈဘကျခမျးဟာ မဂြောလိဂျမှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျတော့မယျ့ သူ့ရဲ့အသငျးသဈ အငျတာမိုငျယာမီအသငျးအတှကျ ဘာစီလိုနာအသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဆီကို ချေါယူဖို့ ဆကျသှယျခဉျြးကပျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ဘကျခမျးရဲ့ကလပျဖွဈတဲ့ အငျတာမိုငျယာမီအသငျးဟာ ၂၀၂၀ မတျလမှာစတငျမယျ့ မဂြောလိဂျရာသီသဈမှာ စတငျပါဝငျယှဉျပွိုငျတော့မှာဖွဈပွီး ရီးရဲလျမကျဒရဈနဲ့ ယူနိုကျတကျဂန်ထဝငျကစားသမား ဘကျခမျးအနနေဲ့ ပထမဆုံးရာသီမှာကတညျးက အငျအားကွီးအသငျးအဖွဈ ရပျတညျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနတောဖွဈပါတယျ။
အခုလညျး Barcelona Radio host Xavi Campos ရဲ့ဖျောပွခကျြအရ မကျဆီအနနေဲ့ သူသာ ဆန်ဒရှိရငျ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီအကုနျမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးကနေ အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ထှကျခှာခှငျ့ရှိတယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါလာပွီးနောကျ ဘကျခမျးက မကျဆီကို အမရေိကနျနိုငျငံဆီ ပွောငျးရှလေ့ာဖို့ ဆကျသှယျခဉျြးကပျခဲ့တာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
ဘကျခမျးကိုယျတိုငျကလညျး အရငျတုနျးက သူ့ရဲ့အိပျမကျဆနျတဲ့အပွောငျးအရှပေ့ဈမှတျတှအေကွောငျး ဖှငျ့ဟခဲ့ဖူးပွီး ယခုနှဈအစောပိုငျးက လကျရှိကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့အကောငျးဆုံးကစားသမားတှအေဖွဈ သတျမှတျခံထားရတဲ့ မကျဆီနဲ့ ရျောနယျဒို နှဈယောကျစလုံးကို သူ့အသငျးသဈအတှကျ ချေါယူလိုတယျလို့ ဝနျခံခဲ့ဖူးပါတယျ။
မကျဆီဟာ ရာသီသဈမစတငျခငျ ရရှိခဲ့တဲ့ ဒဏျရာပွဿနာကွောငျ့ ဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ တဈပှဲမှ ပါဝငျမကစားရသေးပမေယျ့ သူနဲ့ပတျသကျလို့ သတငျးတှကေ ဒီရကျပိုငျးအတှငျး အတျောလေးထှကျပျေါနပေါတယျ။
”မကျဆီဟာ ၂၀၂၁ အထိ စာခြုပျခြုပျဆိုထားပွီး စာခြုပျမပွညျ့ခငျ ၁နှဈအလိုမှာ သူဆန်ဒရှိရငျ အသငျးကနေ အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ထှကျခှာခှငျ့ရရှိထားပါတယျ။ သူဟာ သူ့အနာဂတျအတှကျ လှတျလှတျလပျလပျဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့ရရှိထားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူက အသငျးအပျေါ အရမျးခဈြမွတျနိုးပွီး ကြှနျတျောလညျး ဒီအခကျြကို မစိုးရိမျပါဘူး”
”ဇာဗီ၊ အငျနီယစေတာနဲ့ ပူယိုးလျတို့လညျး မကျဆီလိုပဲ စာခြုပျထဲမှာ အဲဒီအခကျြပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ မကျဆီကို ကှဲပွားခွားနားတဲ့အခကျြနဲ့ စာခြုပျထဲမှာ ထညျ့သှငျးမခြုပျဆိုထားပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျော ထပျပွောပါမယျ။ မကျဆီအနနေဲ့ အသငျးမှာ နောကျနှဈအကွာကွီး ဆကျကစားဦးမယျဆိုတာ ကြှနျတျော လုံးဝသံသယမဝငျပါဘူး”လို့ ဘာစီလိုနာအသငျးဥက်ကဋ်ဌ ဘာတိုမူက မကွာသေးခငျက ပွောကွားထားပါတယျ။